Madaxweynaha Puntland oo u hambalyeeyay Axmed Madoobe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Puntland oo u hambalyeeyay Axmed Madoobe
August 22, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa u hambalyeeyay Axmed Maxamed Islaam oo loo doortay madaxweynaha Jubbaland.
“Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaya magaca goleyaasha dowladda iyo shacabka waxa uu hambalyo u dirayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo maanta lagu doortay magaalada Kismaayo. Wuxuuna ugu baaqay madaxweynaha cusub in uu ka shaqeeyo in khilaafka gudaha Jubbaland lagu dhammeeyo wadahadal.” Ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada maanta oo Khamiis ah.
Puntland ayaa baaq u jeedisay maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya in ay dhammeeyaan khilaafka ka dhex jira, war-saxaafadeedka ayaa intaas ku daray.
Axmed oo loo yaqaan Madoobe ayaa maanta oo Khamiis ah baarlamaanka Jubbaland u dorteen madaxweynaha afarta sanno ee soo socota. Waxa uu maamulka Jubbaland hoggaaminayay tan iyo sanadkii 2013.
Ugu yaraan labo qof oo ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacaay Laascaanood
Laascaanood -(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhimatay shan kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maanta oo Talaado ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka. [...]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dowlada Puntland ayaa ka hadashay wada-hadalo dhawaan dhexamaray masuuliyiinta Puntland iyo Galmudug. Wasiirka deegaanka Puntland Cali Cabdulaahi Warsame oo la hadlay warbaahinta maxaliga ah ayaa sheegay in aysan jirin wax heshiis ah oo [...]